ကြော်ငြာကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 22
မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ သြဂုတ် ၁၄၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်က နေရာတိုင်းမှာ ဒုက္ခတွေရှိတယ်။ အကူအညီလုိုအပ်တဲ့ နေရာတွေ ရှိတယ်။ သိတဲ့ကြားတဲ့သူတွေကတော့ ရှိတဲ့ရတဲ့ ကူညီအားပေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ ဒီတပတ်မှာတော့ ချို့တဲ့တဲ့သီလရှင်စာသင်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ ပြည်မြို့က မြသိင်္ဂီကြံခင်းပရဟိတ သီလရှင်စာသင်တိုက်အတွက် နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ယူတီကာမြို့၊ သန္တိသုခကျောင်းတိုက်က အရှင်ပညာနန္ဒက ငွေကျပ် ၄ သိန်း ခွဲ စုဆောင်းလှူဒါန်းမှု ပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံများကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ စုံညီ အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ဖိတ်ကြားခြင်း (မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ သြဂုတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂) အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၈ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်မည့်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာကွန်မြူနီတီများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲအား အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေး ၊ ဆိုင်ရာကိစ္စများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်ပါရန် အောက်ပါ အတိုင်း ဆန်ဖရန်စစ္စကို (ဗေးဧရိယာ) ရှိ မြန်မာကွန်မြူနီတီအစည်းအဝေးကို ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ် အချိန် ညနေ ၆း၀၀ မှ ည ၈း၀၀ အထိ နေ့ရက် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၂ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့) နေရာ Centerville Community Center 3355, Country Dr., Fremont, CA 94536 (ရွှေည၀ါ ဆရာတော် အရှင် ပညာသီဟ တရားပွဲကျင်းပရာနေရာ)...
ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ တရားပွဲစဉ်များနှင့် ခရီးစဉ် ထွက်ရှိ မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂ လက်ခံရရှိသော အချက်အလက်များအရ ယခုလဆန်းမှ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာသို့ ခရီးကြွချီလာသော ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟသည် အောက်ပါ ခရီးစဉ်အတိုင်း ပြည်နယ်များသို့ ကြွရောက်ပြီး တရားပွဲများ လက်ခံချီးမြှင့် ပေးမည်ဟု သိရသည်။ ၁၂ သြဂုတ် တွင် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ ဖရီးမောင့်မြို့၊ စင်တာဗီးလ် ကွန်မြူနီတီရိပ်သာ ၁၉ သြဂုတ် တွင် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ ဒေလီစီးတီး ထေရ၀ါဒဓမ္မအသင်း (http://tdsusa.blogspot.com/ ) ၂၅၊ ၂၆ သြဂုတ် တွင် နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ဘတ်ဖဲလိုးမြို့ ၊ ဆက်သွယ်ရန် – ကိုမင်းနိုင် ၇၁၆ ၅၄၄ ၁၁၇၂ ၁၊ ၂ စက်တင်ဘာတွင် နယူးယောက်ပြည်နယ်၊...
ဓမ္မဘေရီဆရာတော် အရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း) (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ၊ ပိဋကတ်တစ်ပုံဆောင် ဒီဃဘာဏက၊ ဒီဃနိကာယ အဂ္ဂဓမ္မာစရိယ) တရားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ။ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ သြဂုတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ကယ်လီဖုိုးနီးယားပြည်နယ်၊ဥက္ကလံမြို့၊ ဓမ္မအေးရိပ်ကျောင်းတွင် ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယမှ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားတော်မြတ်ကုို ဟောကြားချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်ကုိုနာကြားလိုသူနှင့် ဆရာတော်ဘုရားအားဖူးမျှော်လုိုသူ ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်များအနေဖြင့် လာရောက်၍ နာယူ ဖူးမျှော်ကြပါရန် အလေးထား၍ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ဓမ္မအေးရိပ်ကျောင်း ဓမ္မမိသားစုများ နေ့ရက်။ ။ ဒုတိယ၀ါဆိုလ္ဆုပ် ၉ ရက် သြဂုတ်လ ၁၂၊ စနေနေ့။ အချိန်။ ။ နံနက် ( ၁၁ ) နာရီ နေ့ဆွမ်းကပ်၊ နေ့လည် ( ၁ )နာရီ တရားပွဲ လိပ်စာ။ ။ 2523,23rd ave C...
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာရောက် ရွှေည၀ါဆရာတော်တရားပွဲ ဖိတ်ကြားစာ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၂ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ဖရီးမောင့်မြို့၊ စင်တာဗီးလ် ကွန်မြူနီတီစင်တာမှာ ညနေ ၃ နာရီက ၆ နာရီအထိ ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟ၏ တရားပွဲ “လူသာသေ၊ နံမယ်မသေစေနဲ့” ကျင်းပမှာဖြစ်လို့ အားလုံးကို ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ထေရုပ္ဗတ္တိကိုလည်း ပူးတွဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တရားပွဲမှာ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကို အဟာရဒါနလှူဒါန်းမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (Design – Ko Win Hlaing) Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ – မေတ္တာနန္ဒစာသင်ကျောင်းက အပြန် (MoeMaKa Interview) (0) နိုဝင်ဘာ ၂၈၊...
(Free All Political Prisoners in Burma ) ” … မောင်လင်္ကျာထွန်းသည် အသက် (၄၀) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း သူ၏ဘဝထက်ဝက်ခန့် (နှစ်ပေါင်း၂၀) နီးပါးသည် အကျဉ်းထောင် အတွင်း၌သာ ရှင်သန်ခဲ့ရသူဖြစ်ကြောင်း သိခဲ့ရသည်။ သူသည် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အကျဉ်းထောင်ထဲသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်လည်းဖြစ် သည်။ သူ၏ဘဝသက်တမ်း ထက်ဝက်ခန့်သည် အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် အချုပ်အနှောင်ခံဘဝတွင် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့်ကင်းကွာနေရ သော်လည်း ဘဝတူအကျဉ်းသားများစွာတို့အား သူတတ်မြောက်ထားသောပညာရပ်များဖြစ်သည့် အင်္ဂလိပ်စာ၊ ပြင်သစ်စကားတို့အပြင်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလမ်းညွှန်ပြသခဲ့သည့် မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရား စခန်းနှင့် ဘုရားကျောင်းဆောင်တို့အားလည်း သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်အတွင်းတည်ထားကိုးကွယ်ကာ လမ်းညွှန်ပြသသင်ကြားပေးနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပေသည်ဟု သိရှိခဲ့ရသည်။ …” (ကျော်သူ၏ လွတ်မြောက်ရေးသုို့။ မိုးမခ ဧပြီ ၂၀၁၂ ဆောင်းပါး မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြသည်) http://ppMoemaka.blogspot.com/ မှာ အခြားအကျဉ်းသားများအကြောင်း ဖတ်ရှု့ပါ...
Mar Mar Aye – ဂီတပညာရှင် တေးသံရှင် ဒေါ်မာမာအေး ၇၀ပြည့် မွေးနေ့
ဂီတပညာရှင် တေးသံရှင် ဒေါ်မာမာအေး ၇၀ပြည့် မွေးနေ့ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်၏ ဂန္ထ၀င်ဂီတပညာရှင်၊ တေးသံရှင်၊ ဒေါ်မာမာအေး ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် ချစ်ခင်သူ မိတ်ဆွေများနှင့် မုန့်စားကြရန် ကိုယ်တိုင်လက်ရေးနှင့် ဖိတ်စာပေးပို့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ မိုးမခမီဒီယာက မိမိတို့၏ နာယက၊ မိခင်ကြီး ဒေါ်မာမာအေး သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပြီး မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်စေရေး ဂီတအနုပညာဖြင့် ဆထက်တံပိုး အောင်မြင်စွာ ထမ်းဆောင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြီး ဂါရ၀ပြုလိုက်ပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ စင်္ကာပူ၊ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၂ သြဂုတ်လ ၁၉၊ ၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ၂ နာရီက ၇ နာရီ စင်္ကာပူ ပိုလီကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာ ဟောပြောမည်သူများ – အော်ပီကျယ်၊ ကျော်ဝင်း၊ မောင်ဝံသ လက်မှတ်များ – ၁၅၊ ၂၀၊ ၂၅ စင်္ကာပူဒေါ်လာ No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးမခမိတ်ဆွေ (မန္တလေး)၊ ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၂ မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မစေတိယကျောင်းဆောင်သစ်ကြီး ရေစက်ချပွဲကို ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်ရာ ယခုဆိုလျှင် အကြိုတရားပွဲများပင် ကျင်းပနေပြီ ဖြစ်သည်။ ၂၂-၇-၂၀၁၂-မိုးတားဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသူရိယာဘိဝံသ၊ ၂၃-၇-၂၀၁၂-မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တရာဇဓမ္မာဘိဝံသ၊ ၂၄-၇-၂၀၁၂-ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ-တို့ ဟောကြားမှာဖြစ်ပြီး၊ ၂၆-၇-၂၀၁၂-ရက်နေ့၌ ဓမ္မစေတိယ ကျောင်းဆောင်သစ် ရေစက်ချပွဲနှင့် အတူ လောကနာထစေတီတော် ထီးတော်တင်ပွဲ အနေကဇာတင်ပွဲ တို့ကိုပါ ပူးတွဲကျင်းပမှာ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဓမ္မစေတိယကျောင်းဆောင်သစ် ရေစက်ချပွဲအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ထွက် စာချ/ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်များနှင့် တပည့်ဒကာ/ဒကာမများ၊ ကျောင်းဒကာ/ကျောင်းဒကာမများ၏ ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟများ တက်ရောက်ကြမည်...
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၂ လာမည့် ၂၀၁၂၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်သည် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ၏ သမိုင်းမော်ကွန်းသစ် ရေးထိုးသော နေ့ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည် ၁၉ ၈၈ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသားလူငယ်များက တတိုင်းပြည်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အထွေထွေသပိတ်ကြီး ဖော်ဆောင်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ၂၆ နှစ်လုံးလုံး တပါတီစနစ်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့ဖြင့် အုပ်ချုပ်နေသော အစုိုးရအဆက်ဆက်ကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှ မော်ကွန်းထိုးစတင်ခဲ့သော ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ တိုက်ပွဲသည် ယခု ၂၀၁၂ ၊ ၂၄ နှစ် ဆက်တိုက် ဆက်လက် ချီတက် တိုက်ပွဲဝင် ရုန်းကန်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လာမည့် ၂၄ နှစ်မြောက် ၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံနေ့ကို...